Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Martinique Breaking News » Duulimaadyada ka imanaya Mareykanka ilaa Martinique ee Diyaaradaha Mareykanka hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Martinique Breaking News • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaadyada ka imanaya Mareykanka ilaa Martinique ee Diyaaradaha Mareykanka hadda.
American Airlines waxay u adeegsan doontaa diyaaradda Embraer 175 oo leh 76 kursi duulimaadyada duulimaadyada saddexda iyo badhka ah ee ka socda USA kuna taga Martinique.
Iyada oo in ka badan 35 meelood loo aado jasiiradaha, Mareykanka ayaa ah diyaaraddaada jasiiradda Martinique ee Faransiiska.
American Airlines, oo ah shirkadda ugu weyn ee duulimaadyada Mareykanka, waa lamaane muhiim u ah muddada dheer ee Jasiiradda Ubax.
Laga bilaabo Nofeembar 6, American Airlines waxay bilaabi doontaa adeeggeeda aan joogsiga lahayn inta u dhexeysa Madaarka Caalamiga ah ee Miami iyo Aimé Césaire International Airport ee Fort-de-France.
Duulimaadyadii Martinique ee ka imaan jiray Mareykanka ayaa dib u bilaaban doona iyadoo ay u mahadcelinayaan American Airlines. Laga bilaabo Nofeembar 6, xamuulku wuxuu bilaabi doonaa adeeggiisa aan joogsiga lahayn inta u dhexeysa Madaarka Caalamiga ah ee Miami iyo Aimé Césaire International Airport ee Fort-de-France. Duulimaadyadu waxay shaqayn doonaan usbuuciiba hal mar Sabtida ka hor intaanay kordhin saddex jeer toddobaadkii Talaadada, Khamiista iyo Sabtida Kirismaska ​​iyo qeybta labaad ee Febraayo ilaa Maarso.
“American Airlines, shirkadda ugu weyn ee duulimaadyada Mareykanka waa lamaane muddo dheer muhiim u ah Jasiiradda Ubax”, ayuu yiri Guddoomiyaha Dalxiiska Martinique Bénédicte di Geronimo. “Taasi waa sababta aan ugu faraxsanahay inaan gacma furan ku soo dhaweynno markabkeenna weyn ee Mareykanka iyo dhammaan rakaabkiisa. Khibrad u lahaanshaha Martinique ayaa hubaal ka dhaadhicin doonta booqdayaashayada Mareykanka sababta Martinique uu dhowaan u helay abaalmarinno Dahab ah Toddobaadka Toddobaadka ee 2021 Abaalmarinta Magellan oo ah Meel u habboon Eco-Friendly “Green”, ayaa loogu magac daray #1 Meesha Soo Baxaysa ee Adduunka sanadka 2021. , iyada oo aan la xisaabin labada kala -sooc ee UNESCO ay dhowaan siisay Doonteena Yole ee caadiga ah iyo sidoo kale hodanka noolahayaga kala duwan ”.
In ka badan 35 meelood oo la geeyo jasiiradaha, American waa diyaaraddaada jasiiradda Martinique ee Faransiiska, ayay tiri Evette Negron, Maareeyaha Iibka Channel -ka ee American Airlines. "Waa wax lagu farxo in la siiyo dadka socotada ah ee Mareykanka fursad ay ku ogaadaan quruxda iyo taariikhda hodanka ah ee Martinique dhammaan amniga, laga soo bilaabo markii la xiray suunka suunka."
Diyaaradda Embraer 175 oo leh 76 kursi ayaa loo isticmaali doonaa duulimaadyada saddexda iyo badhka ah.